Apple inovhura Apple Store Online muIndia | IPhone nhau
India ndeimwe yenyika dzine mikana yakawandaMakambani ese makuru ehunyanzvi akave nekuona nyika yeAsia mumakore achangopfuura, hongu, nhasi tinofanirwa kuona kuti nyika inoshanduka sei sezvo iri imwe yeakanyanya kubatwa nedenda reCovid-19. Nekudaro, kubva kuCupertino havadi kupotsa mukana wekuva muIndia. Kubva kuApple ivo vaida kuendesa chikamu chezvavanogadzira kuenda kuIndia, uye ikozvino, mushure mezviziviso zvepamutemo, Apple yakangovhura Apple Online Chitoro muIndia. Mushure mekusvetuka isu tinokuudza iwe zvakawanda nezve idzi dzakakosha nhau.
Paive nemakuhwa mazhinji aitaura nezvekupinda kwaApple kuIndia, asi mirau yeIndia maererano nekutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika yaivharidzira basa guru reApple. Ne shanduko mumitemo yekutengeserana yemuno, nechinangwa chekudyara kukuru kwemakambani ekunze, Apple yatove nekuenda-mberi kupinda mumusika weIndia. India itsva Apple Online Chitoro iri pano kugara, a Apple Store kwaunogona kutenga zvigadzirwa zvese zvekambani mukuwedzera pakugamuchira rutsigiro (muChirungu neHindi) zvakananga pane izvi zvigadzirwa. Zvigadzirwa zvinogona kuve tenga nemakadhi echikwereti uye echikwereti, iyo EMI kiredhiti kadhi, RuPay, UPI uye NetBanking. Ivo vanozotogona kuve nekwaniso yekuwana iyo Apple Chitoro pamwe nemudzidzi discounts.
Apple yaidawo kumisikidza iyo iPhone kutsiva chirongwa muIndia (inowanikwawo kuendesa Samsung uye OnePlus zvishandiso), kuti uwane madhora kana uchitenga iPhone nyowani. Kufamba kukuru kwekutora mimwe misika munyika ino. AppleCare + inowanikwawo kubva nhasi muIndia, ichiwedzera warandi yenyika kusvika makore maviri, pamusoro pekuwedzera netsaona yekukuvara kufukidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Store » Apple inovhura Apple Store Online muIndia
Mutauro weApple programming, Swift, yava kuwanikwa yeWindows
Mashandisiro ekushandisa iOS 14 majeti neWidgetsmith